poe 4E1-FE Interface ကို Converter - တရုတ်ဟန်ကျိုး FCTEL နည်းပညာ
FXO / FXS စကားသံကိုဖိုင်ဘာ mux
E1 ကျော် FXO / FXS စကားသံကို
modular Multi-service ကိုဖိုင်ဘာ mux
N ကို E1 + Ethernet PDH x
optic 1 + 1 PDH multiplexing
modular Multi-service ကို Pdh mux
co-Direct 64K converter
Ethernet converter ကိုမှ E1
RS232 / 422/485 converter ကိုမှ E1
V.35 / V.24 / RS530 converter ကိုမှ E1
E1 converter ကိုမှ poe Ethernet
IP ကိုကျော် TDM
IP ကိုကျော် E1
IP ကိုကျော် V.35 / V.24
IP ကိုကျော် Voice ကို
RS232 / 422/485 ဖိုင်ဘာ modem
1-64 * ခွောကျသှေ့အဆက်အသွယ် mux
စက်မှုရထားလမ်း type ကိုခြောက်သွေ့တဲ့အဆက်အသွယ် mux
optic converter ကိုမှ STM-1 လျှပ်စစ်
E1 ကာကွယ်မှု switch ကို
optical / E1 ပွနျလညျ
OEO Optical Fiber ဖိုက်ဘာအသံချဲ့စက် repeater
စက်မှု Din ရထားလမ်းမီဒီယာ converter
ဗီဒီယို / အသံဖိုင်ဘာ mux
E1 ဗီဒီယို / အသံ codec
ဖိုက်ဘာကျော် HD ဗီဒီယို
modular Multi-service ကို Fiber MUX
ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသို့မဟုတ် Unframed E1 Optical Ethernet Converter
8E1-1FE interface ကို Converter
co-Direct 64K-V.35 Converter
E1-16Voice + 4FE + 4RS232 PCM multiplexing
Ethernet ကျော် 64 ရုပ်သံလိုင်းစကားသံကို (IP)
Ethernet ကျော် 16 ရုပ်သံလိုင်းစကားသံကို (IP)
16 Channel ကို RS232 / 422/485 Fiber Modem
8 Channel ကို RS232 / 422/485 Fiber Modem
1-2 ရုပ်သံလိုင်း RS232 / RS485 / RS422 Fiber Modem (Mini ကို)
poe 4E1-FE Interface ကို Converter
This interface converter is based on FPGA, using reverse direction multiplexing technology to bundle for multiple E1 circuits to transmit the Ethernet data of 4Channel 100BASE-TX. It can realize 1~4 E1 channel to convert between Ethernet optical interface.
FOB စျေး: US $1 - 600 / Piece
Min.Order အရေအတွက်: 1 Piece/1 Pair
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: 2000 Piece/Pieces per Month
ဤသည်ကို interface converter ကို 4Channel 100BASE-TX ၏ Ethernet ဟာဒေတာထုတ်လွှင့်ဖို့မျိုးစုံ E1 ဆားကစ်များအတွက် bundle မှပြောင်းပြန်ဦးတည်ချက် multiplexing နည်းပညာသုံးပြီး FPGA အပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါဟာ Ethernet ဟာ optical interface ကိုအကြားပြောင်း 1 ~4E1 ရုပ်သံလိုင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကိရိယာကို Ethernet ဟာ optical interface ကိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက် E1 လိုင်းများလုပ် Ethernet ဟာ optical interface ကိုထောက်ပြဖို့ transceiver ကို signal ကိုအမှတ် transmit နိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဝေးလံခေါင်သီကွန်ယက်ကိုတံတားနှင့်မတူဘဲဤစက်ကိရိယာ, 1-4Channel E1 ရုပ်သံလိုင်း configuration ကိုထောကျပံ့နိုငျအလိုအလြောကျ E1 ၏နံပါတ် detect နှင့်ရရှိနိုင်သော E1 ရွေးနိုင်သည်။ ဒါဟာ E1 လိုင်းများထုတ်လွှင့်အချိန်နှောင့်နှေးခြားနားချက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
◆ To achieve Ethernet data transparent transmission in 1-4E1 circuits
◆ Can realize the local and the remote device reset
◆ Ethernet Interface is 100BASE-FX, support VLAN protocol
◆ Inter-set dynamic Ethernet MAC address (4,096) with local data frame filtering function
◆ Single Channel lines rate is 1984Kbit/s, 4Channel Bandwidth is up to 7936Kbit/s
◆ Channel 10M/100M Ethernet interface can isolate each other to realize communication independently
◆ Ethernet interface supports10M/100M, half/full duplex auto- adaptable and AUTO-MDIX (crossed line and straightly connected line self-adaptable )
◆ CRC automatic alarm threshold can be set to isolate the poor quality transmission lines and cut offasingle-direction. When 2M branch circuit onedirection error rate exceeds threshold, cutting off this direction the other direction is not affected; that is to say, both of the Ethernet directiontransmission can be asymmetric
◆ Allow 4-Channel E1 transmission time delay difference 100ms. When the margin exceed the allowed range, the system can automatically stop on the E1 that time delay is too large to send data
◆ E1 interface conform to ITU-T G.703, G.704 and G.823, not support the use of signal timeslot
◆ E1 interface module with inter-set clock recovery circuit and HDB3 code circuit
◆ Support E1 channel hot-plug in the device, and automatically detects the effective E1 channel and will not interrupt data transmission
◆ Can support 1-4Channel E1 channel configuration, can automatically detect the number of E1 and select the E1 available;
◆ Ethernet supports standard IEEE802.3af / at power supply; Each port can be sufficient power output 15.4W (IEEE802.3af), at 25.5W (IEEE802.3at);
interface နျ Standard: protocol ကို G.703 နှင့်အတူလိုက်လျော;
E1 impedance: 75Ω (unbalance), 120Ω (ချိန်ခွင်လျှာ);
Jitter သည်းခံစိတ်: protocol ကို G.742 နှင့် G.823 နှင့်အညီခုနှစ်တွင်
Allowed attenuation:0~ 6dBm
◆ Ethernet interface ကို (10 / သန်း 100)
interface နှုန်း: 10/100 Mbps ထိတဝက် / အပြည့်အဝ duplex Auto-ညှိနှိုင်း
interface နျ Standard: ကို IEEE 802.3, ကို IEEE 802.1Q (VLAN) နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့
MAC လိပ်စာ Capability: 4096
connector: RJ45, auto-MDIX ပံ့ပိုး
◆ Ethernet poe features တွေ
poe စံ: ကို IEEE 802.3af / မှာ
poe အမျိုးအစား: အဆုံး Crossing Method ကို (optional ကို
poe ဆိပ်ကမ်း Features: ဆိပ်ကမ်း output power ကို 15.4W /
poe ဂီယာ core ကို: 1/2 + 3/6-pair တစုံ (optional ကို 4/5
+ 7/8-pair တစုံ)
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -10 ° C မှ ~ 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အလုပ်အဖွဲ့စို: 5% ~ 95% (အဘယ်သူမျှမငွေ့ရည်ဖွဲ့)
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -40 ° C မှ ~ 80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှုကိုစို: 5% ~ 95% (အဘယ်သူမျှမငွေ့ရည်ဖွဲ့)
functional ဖျေါပွခကျြ poe 4E1 / FE interface ကို Converter
ဆိပ်ကမ်းဖျေါပွခကျြ4* E1 interface ကို; FE Interface
စွမ်းအား power supply: AC180V ~ 260V; DC က -48V; DC က + 24VPower စားသုံးမှု: ≤10W
အတိုင်းအတာ ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: Mini ကိုအမျိုးအစား 216X140X31mm (WXDXH), 1.3KG / အပိုင်းအစ
ယခင်: Unframed E1-V.35 Converter
နောက်တစ်ခု: poe E1-FE Interface ကို Converter AF / မှာ
E1 ရန် Fe Interface ကို Converter
Interface ကိုပရိုတိုကော Converter
သီးခြား Interface ကို Converter
တွေမှာ Passive Interface converter
Pdh Interface ကို Converter
Rs232 ရန် Rs485 Interface ကို Converter
Rtu Interface ကိုပရိုတိုကော Converter
V.35 ကျော် E1 G.703 Interface ကို Converter
co-Direct 64K-FE Converter
V.35 interface ကို converter ကိုမှ Ethernet
co-Direct 64K-RS232 / 422/485 Converter
ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသို့မဟုတ် Unframed E1-4FE interface ကို Converter
2,9XiYuan 2nd လမ်း, အနောက်ရေကန်နည်းပညာပန်းခြံ, ဟန်ကျိုး, တရုတ်တည်ဆောက်ခြင်း 7F ။